Dhirta dawooyinka | March 2020
Wanaajinta sifooyinka slyti, sida loo diyaariyo iyo soo saaro warshad
Sony - warshad qashin ah oo ka tirsan qoyska dalladda. Waxay leedahay dherer ah oo ku saabsan hal mitir, xididku waa dheer, xoog leh, jirku waa god. Ciriiri caleemaha waaweyn iyo ubax midab cad, oo laga soo ururiyey dalladaha adag ee inflorescences. Waxay leedahay midho kulul oo dheer. Blooms xagaaga hore, iyo Bisaylkiisa wuxuu dhacaa bisha Agoosto.
Talooyinka ugu fiican ee daryeelka iyo abuuritaanka calandarada
Calendula waxaa loo tixgeliyaa daawooyin ka badan dhirta ornamental. Si kastaba ha noqotee, orange-jaalle ah, ubaxyo dhalaalaya oo ka soo jeeda caleemo cagaaran oo muuqaal ka badan muuqaal. Kalendarka cirridka ah wuxuu u eegi doonaa si isku mid ah labada kooxba, iyo hal beerto, oo ah bartamaha qaababka ama qaab ahaan.
Thyme: beeritaanka, daryeelka, taranta
Cawska yar oo udambeysan - kariimka, oo daboolaya sharooto qallalan oo qalalan oo ubax leh ubax, ayaa muddo dheer soo jiitay dareenka dadka. Masriyiintii qadiimiga ahaa waxay u isticmaaleen forme for ujeedooyin dhaqan. Cilmi-yahannada hore (Avicenna, Dioscorides, Theophrastus) waxay ku qoranyihiin sifooyinka cajiibka ah ee kiriim (antiviral, antifungal iyo antibacterial).
Sidee loo isticmaalaa calendula: sifooyinka wanaagsan iyo ka hortaga
Calendula waa warshad isbitaal ah, oo loo yaqaano marigolds. Dhirta ubaxu waxay ubaxyada ubaxyada casaan-jaale ah ku ciyaaraan kaalin muraayad ah oo ku taal floriculture, laakiin qiimaha ugu muhiimsani waxay ku jiraan sifooyinka wanaagsan ee la heli karo. Daawada dadweynaha, sifooyinka wanaagsan ee calendula waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cuduro kala duwan.
Qodobbada waxtarka leh ee burcadka, isticmaalka dhirta sunta leh meelo kala duwan
Buttercups waa mid ka mid ah ubaxyada ugu quruxda badan ee dabeecadda abuuray. Waxay isku xirxiraan kuwa aan ku haboonayn: xoog iyo daciifnimo, faa'iido iyo waxyeelo, nolol iyo dhimasho, daawo iyo sun. Ubaxyo huruud ah oo aad u qurux badan ayaa soo jiitay dad badan. Buttercup (Ranunculus) wuxuu sheegay in Dioscorides (I century AD) uu ku jiray daaweyntiisa. Riyooyinka qadiimka ah ee Scandinavians iyo Slavs ee la xidhiidha ubaxa burcadka leh ee ilaahyada Odin iyo Perun.
Codsiga iyo bogsashada guryaha Monarda
Monarda waa dhir udgoon, geedka reer Gubotsvetnye. Waddanku waa Waqooyiga Ameerika. Monarda ayaa muddo dheer loo adeegsaday sidii dhir iyo daawo. Laga soo bilaabo qarnigii XIX, geedo waxaa loo yaqaanay adduunka oo dhan sida bergamot, balsa liin Maraykan ah, ka sameysan liin. Cawska Bergamot waa geedka sanadlaha ah ama gaaban ilaa hal mitir iyo badh.
Tan iyo wakhtiyadii hore, Verbena officinalis caan waa caan ku ah hantida kala duwan ee faa'iidooyinka. Celtic Druids waxay u yeedhay "quduus ah." Verbena waxaa u adeegsan jiray dhakhaatiir iyo dhakhaatiir ku takhasusay caafimaadka. Qodobkani, waxaan ka fiirsan doonaa halbeegyada kiimikada, sifooyinka daawooyinka waxtarka leh ee verbena, xanibaadda isticmaalka, isticmaalka cunto karinta, ururinta iyo keydinta qalabka cayriin ee verbena.
Daaweynta: Guryaha waxtarka leh, ka hortaga iyo diyaarinta alaabta ceeriin ee caafimaadka
Kiriimku waa geedka sanadlaha ah wax yar ka badan nus mitir sare. Maqaalka waa mid toosan, caleemo khafiif ah oo leh cidhifyo jug leh. Waxa la barbar dhigaa horraantii Luulyo oo leh ubax yar oo shan gees ah oo midab cad ah, kaas oo sameeya dalladaha yaryar ee dlka-qaabeeya. Bishii Agoosto, dhirta ayaa dhajisey miro yar yar oo dhererkeedu yahay 3 mm oo leh caraf cad.
Dhammaan wax ku saabsan kororsiga koraya, beeritaanka iyo daryeelidda "xayawaanka caalamiga ah"
Kalluunku waa warshad wax tar leh oo leh caraf udgoon oo udgoon oo macaan leh. Warshadda, oo si ballaaran loo isticmaalo karinta, farshaxanka, kiknoolajiyada iyo daawada dhaqameed, ayaa ixtiraam u haysa hantideeda hodanka ah ee malaayiin qof. Maanta, anisi waxaa lagu beeray ku dhawaad ​​dhammaan dalalka adduunka, waa duurka kaliya ee Giriigga.
Kala saarista abuurka laurel, sida loo abuuro iyo u koro ku xoortay geedihii
Ku dhowaad dhammaan marti-geliyeyaasha waxaa laga yaabaa inay yaqaanaan caleemo qoryo, laakiin in yar oo ka mid ah waxay ogtahay in laurel aysan ahayn uun ku-tiirsanaan uun, laakiin sidoo kale geed aad u qurxoon, badanaa loo isticmaalo ujeedo madax-bannaan. Haddii aad si taxadar leh u barato dhammaan sifooyinka koritaankiisa iyo horumarkiisa, waxaad ogaan doontaa inaad si guul leh ugu kobcin karto geedka guriga.
Sida loo koro dabbaaldegga beerta, beeritaanka iyo daryeelidda warshad ku taal berrinka bannaan
Cawska ama caleemaha, oo sidoo kale loo yaqaano cawska qashinka ah, waa mid aad u kakooban, oo qoryaan leh, caws ah, geedo yar yar oo geedo ah ilaa 70 cm. Geedka ubaxyada ayaa leh ubaxyo yar yar, midab jaalle ah ama ubax casaan ah.
Goobaha banaanbaxa iyo agagaaraha hantida gaarka ah waxaa badanaa laga helaa dhir udubdhexaad ah sida malmal iyo liin. Dadka intiisa badani waxay u badan yihiin in ay mariyaan shaah iyaga, laakiin marwalba ma hubi kartid in geedka ay kuugu horeyso. Waxay leeyihiin muuqaal iyo ari la mid ah, taas oo ah sababta keentay jahwareer.
Noocyo kala duwan oo lagu daray sharaxaad iyo sawir
Maydhku waa warshad aad u qiimo badan oo faa'iido leh oo loo adeegsaday nin wakhtiyadii hore. Dunida casriga ah waxaa laga rabaa daawada, karinta, cadarka. Maqaalku wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan noocyada noocyada kala duwan ee la heli karo, iyo macluumaad kooban oo ku saabsan qaar ka mid ah ayaa la bixiyaa. Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay database-ka The Plant List, caleemaha Nolosha waxaa iska leh qoyska Luminous oo ka kooban 42 noocyada iyo Beelaha.
Kupena: beeritaanka, sii kordhaya iyo daryeelka
Koupena waa dakhliyo badan oo dareema in ay ku fiican tahay hooska, taas oo macnaheedu yahay inay noqon karto mid fiican oo leh beerta dheer. Beerta xayawaanka ee dooxada (magaca labaad waa kupeny) ayaa habboon in lagu abuuro naqshado jawi dabiici ah, gaar ahaan marka la tixgelinayo awooda dhirta si ay u koraan si dhaqso leh. Guud ahaan, waxaa jira ilaa 50 nooc oo kupen ah, noocyo kala duwanna ma aha midabka kaliya ee midabka iyo qaabka ubaxa, laakiin sidoo kale xajmiga baadiyaha laftiisa (tusaale ahaan, kup oo ah shong ee shiinaha ah wuxuu koraa dhererka 120 cm).
Sidee u koraan jecel dalka
Lovage sida warshad ornamental waa xiiso yar, laakiin sidii dhirta basbaaska iyo daawada muddo dheer loo yaqaan. Ariga iyo dhadhanka dhadhanka ah ee jecel waxay u egtahay celery. Qeexida jacaylka Sida ay u egyahay jecel, Faransiisku waxay ugu yeeraan qashin been abuur ah. Caleenta dhirta ayaa dhab ahaantii la mid ah mataanaha: glossy, taarikada caleenta cagaaran oo dhalaalaya leh geeso boorar ah oo loo qaybiyay qaybo badan.
Waa maxay faa'iido madow madow, sifooyinka bogsashada iyo waxyeellada
Baradhada, yaanyada, iyo eggplants, oo noo yaqaanno nolol maalmeedka, ayaa ka mid ah sagaal boqol oo nooc oo ka mid ah qoysaska dhirta sanadlaha ah, oo loo yaqanno beertii. Wakiil caan ah oo ka mid ah kooxdani waa timo madow, oo faa'iido u leh daaweynta bogsashooyinka muddo dheer, tan iyo wakhtigii Hippocrates, iyo waxyeelada suurtagalka ah ee aan la ilaawin dhakhaatiirta.
Isticmaalka faa'iidooyinka iyo bogsiinta sifooyinka ash
Ash - dukaanka cuntada ee nafaqooyinka. In daawada dad, isticmaal dhammaan qaybaha geedka: jilif, ubax, miraha iyo caleemo. Daroogooyinka, oo ay ku jiraan ash, ka badbaadiyo cuduro badan. Qeexida ash iyo ka kooban walxaha Dawada - geed dheer oo xoog leh. Caleemihiisa waxay leeyihiin dhibco madow. Caleen kasta waxay leedahay caleemo todobo ama ka yar.
Barberry: halabuurka, isticmaalka, hantida faa'iido iyo khilaafaadka
Barberry beeraha iyo beeraha waa wax aad u yar. Bannaanka udubdhexaadku maaha mid si gaar ah u dan leh in ay la tacaalaan duurka udgoon iyo si buuxda u sameeyaan si aan micne lahayn. Barberry, sifooyinka iyo faa'iidooyinka ay faa'iido u leeyihiin ayaa loo yaqaanay aadanaha muddo dheer. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinkeeda (iyada oo aan laga sooci karin tayada kale ee - qurxinta, maqaarka, dhadhanka, iwm.
Waa maxay farqiga u dhaxeeya daawooyinka iyo beeraha (cagaaran)
Sage, ama salvia - mid ka mid ah geedaha ugu faa'iido badan. Luqad, oo loo turjumay sida "caafimaad leh." Daawada, salvia waxaa loo isticmaalaa daawooyinkaas caan ah ee caan ah sida chamomile iyo calendula. Si sahlan loo aqoonsan karo midab buluug ah oo leh buluug ah iyo caraf udgoon. Waxaa jira noocyo fara badan, oo dhammaantood waxay leeyihiin shakhsi shakhsi iyo caruus.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta dawooyinka 2020